Apho ufuna ukufunda njengokuba ebafazini eyona abafazi. (Abantu, qhagamshelana, bahlangana abantu abatsha)
Molo, ndingathanda ukwazi evela kuwe xa sihamba, ngokoluvo lwakho, eyona amathuba iya kuba kwi-qhagamshelana ne-umfazi wam ubudala. Molo ukufumana abafazi ayikho necessarily lula. Zininzi iindlela ukuhlangabezana abafazi. Aph Pets ingaba kakhulu ebukekayo, kodwa yenza kanjalo ezininzi umsebenzi. Abafazi ingaba ngathi kuthi abantu kanjalo herd izilwanyana. Kukho izinto ezininzi abantu abo umgwebi Kuwe. Ngoko ke, kufuneka uzame kwakhona kunye Nabahlobo. Clubs asoloko okulungileyo ukufumana ukwazi abantu. Kuxhomekeke kwizicwangciso zakho inclination, kufuneka ukhethe ilungelo club. Abo ufuna umdaniso kufuneka kuya kwenza ukuba, ngenxa yokuba wenza kuye ndonwabe, hayi ngenxa abafazi. Ungenza ngokukhawuleza ngenxa kwi-opposite, njengoko kwakunjalo intended. Kufuneka ube cacisa, yintoni Wena ingakumbi fond kwaye Wena ke umbuzo uthi nokuba ukuba ayikwazi ukwenza ukuba abafazi kanjalo fun. Ngenxa kuphela abo kwimali efanayo iliza ubude reception umsebenzi. Njengoko ye-Intanethi portals, unga sebenzisa oku, kodwa Yonke into nge-i-i-ka-salt. Oko kubaluleke ngokukodwa ukuqinisekisa ukuba m ngu ngokukhawuleza ukuya kuhlangana kunye”akhethiweyo”(ngenxa chemistry). Ukuba qaphela kanjalo herd instinct, nto leyo yenza indima ebalulekileyo. Kufuneka silindele i apho, kwi-yenza isangqa ka-abahlobo, ebizwa-mhlophe knight ke imbonakalo kwaye oyintanda ngu bemkile, uyazi. Eyona ukwenza a Remix, chances le Abasebenzi. Ngoko ke kubalulekile kunye omnye ukuhamba, omnye amaqela, ilungu club Yakho oyikhethileyo, kwi-Intanethi, okanye ukuzama elula utshintsho Yakho yenza isangqa ka-abahlobo okanye inkampani. Kodwa inye into kusoloko kubalulekile (amazwi e abanye incopho kutheni hayi kulungile) phoselani kwi-towel, Intsingiselo dripping wakhe kude ilitye. Ukuba unayo kwi enye indlela okanye Ezinye isebenza, kufuneka unakekele imiqondiso yosasazo umfazi, u dare (yayiyeyona beautiful ngokuhlwa, sinako ukwenza oko kwakhona, kodwa mna kufuneka. Kufuneka nje beautiful ngokuhlwa kwaye kwaba i-amava ukuthi ngakumbi. Ukuqhuba ngasemva chasing abafazi ayikho kakhulu sebenzisa kwaye unako kuba ngokukhawuleza njengoko Bel, ithambeka yenzelwe. Hlala zolile kwaye polite. Musa kufa kwi Nani leminyaka kodwa Kufuneka zingabi ixesha kuba oku. Ukuba ingaba yena, ngoko ke unako sihamba? yakho, kwaye ungathanda okanye kuba imibuzo kwi njani ukwenza oko. Ukuba wenza, ngoko ke kufuneka ukuba sele incoko. Yenze iimini ezimbalwa. Ukuba okulungileyo zezulu, ngoko ucela ukuba yena ufuna ukuya kuhlangana nani. Kodwa akukho nto uyaya kulo cinema.
Ukususela wena musa get ukwazi ngoko ke, kulungile. Nisolko gonna ibonakale nakanjani.
Ngoko ke, sisebenzisa ekhohlo yedwa. Ngaphandle Intlanganiso isandla waba ke omfutshane hike. Okokuqala, kufuneka kuphela kuba encinane, kodwa iingcaphephe yena usoloko zifunyenweyo isizathu yandisa kuyo. Kwi end, safika kulo qho ebusuku kwaye ngosuku kwaye km. Oko wenziwe incredibly fun. Yintoni wabetha kum yaba njani kakhulu wathabatha care kum, soloko wabuza, nokuba ilungile kuba kum kwaye kudla kunye nam. Oku kunokuba isandi engaqhelekanga, kodwa siyazi thina sele kuba kakhulu ixesha elide kwaye yena sele zenziwe ngenxa yakhe zange. Unabo na olwamkelekileyo biscuits ukusuka kum. Kwi-ukuqeqesha waba ikhangela ngobukho yam N Heee, lanyanzelisa, umzekelo, ukuba ndiya kuhlala elandelayo kuye. Ngexesha hike thina wathetha kakhulu malunga iintsapho zethu. ikakhulu wayethetha luthando, budlelwane nabanye nabantwana. Wacela kum umzekelo njani ndicinga malunga abantwana njani mna qinisekisa i-namanani Iqabane lakho. Phakathi kwabo, wathi ukuba unabo na kanti kuhlangatyezwana nazo naziphi na umfazi othe kwenzeka oku hike kwaye lowo pulls i-hat kwi-phambili kum. Wathi ukuba sinako ndwendwela kwi-isiganeko, kwezinye iindawo ezinkulu ukuya kutyelela. Kunye izicwangciso zakhe yena ayikwazi zalisa kumacandelo amabini eminyaka. Kodwa ke into Engaqhelekanga eyenzekileyo. Wacela kum ukuba ndithi kwaba anomdla, i-acquaintance kuye. Izakuba elungileyo fit kuba nam. Ndathi akukho wathi okokuba ndinguye ndivuma ye-younger abantu ngomhla eyimfama Imihla. Ngelinye Ixesha, lowo reconsiders oku, usapho lwam wabuza ukuba sizimisele ukuqhuba ezimbini kuphela ebusuku nge-ndawo. Ndifuna ukuzisa usapho lwam – Tooth, ukuba apha namhlanje, into ka-ubusuku emoyeni. Ngokwenene, lowo likes usapho lwam, ilungisiwe kwenu, soloko mnandi ukuba Greg kwaye icela njani. Emva hike, ndakhumbula ukuba wathi ezininzi ezidlulileyo ukuba uyahamba nge kunokwenzeka iqabane lakho Hiking. Ukubona ukuba efanayo umdla bakhona. Ndaba zilityelwe kude kube ngoku. ungakwazi kundinceda kwaye ndibe kukuxelela ukuba kutheni yena ke isithethi ngoko ke engaqhelekanga. Kutheni uyahamba nam Hiking, bazalwana N-u kwaye ke ithi izinto, ngolohlobo. Ndifuna ukuqonda hayi-ke-akunjalo. Nceda kwesizathu ixesha elide Okubhaliweyo kwaye imibulelo emininzi ukuba ukhe wenza i-M-u kwaye ukufunda kuyo. Molo, ndingumntu mfana ngomhla ubudala. ‘ve kokuba ezininzi amava kwaye ubudlelwane abafazi bam ubudala. Kuba elungileyo unyaka ndiza kwi ngaphezulu Mature abafazi.
Ndiqinisekile ukuba nabafana kwaye ayikwazi kufumana ezininzi wam ubudala nje hayi inzala kum Ukususela ndihamba kamsinya kunye my dad kwi-iiholide, ndifuna ndimbuza, phi, njani xa mna unako ukufumana ukwazi kwi-AID azole yi best kubekho inkqubela. Ngoko ke kusasa kanye kwakhona Omnye, ngokuqinisekileyo, ndiyazazi amaqela kwaye kuhlangana abafazi, kodwa oku akunjalo lula, kwi dolophana okanye kuba ngamaxesha onke, kuba ndiyinkosi mde kakhulu kwaye ngaphezu iityuwadefault colour. kulungile, hayi ngaphezulu kwe-isidlo kuba amehlo njengoko ubona oko kwaye ikwenza, yehova cm mde kakhulu kwaye ingqinqwa umfazi inqwenelela kum incinci kodwa ke nzima ukufumana apha kwi-RLP. Apho kuwe njengoko UMNTU ka-elikhulu amathuba umntu malunga i-App umntu ukufumana ukwazi. Apho ukufunda ukuba eyona abafazi kuba ngobusuku. Impendulo:”Whorehouse”. ingaba ubudala kwaye hayi funny simemo kwakhona. Molo, ngoko ke, mna ke izolo kwaye umhla phambi yethu kazwelonke isidlo, ndifuna ukufumana ukwazi kuluncedo njengoko Enye kwaye pretty abafazi. Eyona Ngxaki yayikukuba, ubuncinane i-abafazi ingaba beautiful kwaye rhoqo kwi-amaqela kunye ngaphezulu okanye abafazi namadoda kwi-hamba, kwaye ungakwazi athethe. Oko basenokuba umhlobo wayo (ukuba yena sele omnye), okanye ababethetha ngamnye ezinye lula kwaye ukususela oko ndinako ukuba uthi Ewe nje, Heym. Kwaye ingaba kufuneka ndibe eyona mpendulo, kwaye yintoni i-isihloko se incoko. Indlela unako mna ukusombulula iingxaki ezinjalo eyona. Siyabulela ucinga ukuba ke, ukundwendwela enye ngalo msebenzi okanye evela emsebenzini ukukhetha phezulu, ukuba yakho hayi kunye, nisolko sele ixesha elide esezantsi measurements kuhlangana. Indlela malunga ucinga. Ukuba uyaya kuwe kakhulu ukuza kuthi ga ngoku, okanye lento a inyathelo elilandelayo. Kutheni ayikwazi oko kuba ezinye ebalulekileyo ukundwendwela kwam emsebenzini okanye khetha phezulu kum. Wacela kum ukuba unako kum unako waya kusebenza kunye nam ukususela umsebenzi ukukhetha phezulu. Kodwa kuba ndine kuphela nje iqalile, sino wavuma, kuba nge hastens ukumkani ngenyanga. Indlela malunga ucinga. Ndine ezinzima umbuzo bonke ABANTU akukho mcimbi yintoni ubudala. Ndiyazi ukuba wonke umntu umele ezahlukeneyo kwaye yiyo ndicela wonke umntu ngokunxulumene yakhe personal uluvo lwakhe. Ngamnye umntu learns ngaphezulu okanye ngaphantsi mnandi kwaye amazing abafazi ukuze ukwazi Kwakhe, kodwa awunokwazi kuwa ngothando nangona kunjalo, kunjalo, ngasinye kwezi omkhulu abafazi. ngoku yam umbuzo: Yintoni umfazi kufuneka ube okanye njani umfazi kufuneka ibe yintoni iimpawu kufuneka ndithi kuye: abayo, ndinako qinisekisa a budlelwane. Ndithetha nto ukuba kufuneka yenze kunye inkangeleko, kodwa kuphela uphawu. Okanye kukho ngonaphakade. Mna kuba ndinovelwano bonke abafazi kuba ufuna into okanye ufuna a budlelwane nezinye nje ufuna Ngesondo. Kwaye apho ndiya kufumana enjalo abafazi. Mna nje ange ngathi abanye yesitalato closeness kunye umfazi kwaye ukuba kuya kufuneka ukuba ngoku kuza Ngesondo. Nje kancinci ka-cuddling kwaye stroking. Ndathi, ndiza kuba kakhulu affectionate, kodwa ngelishwa, uyakwazi rip nantoni na. Yintoni chances ka-umfazi kwi-i-intanethi exchange. Okanye apho enye into. Ndicinga ukuba nakanjani, uninzi abafazi bam ubudala ingaba ukulifumana nje boring, hayi umzekelo-icatshulwe i-younger
← Kuhlangana abantu